Project Manager (2) Positions
Studio AMK Pte., Ltd.
Coding Background and knowledge, Timeline, Management, Analytical Skill.
မှတ်ချက် - စင်ကာပူ၏အခွဲ ဖြစ်သော ရန်ကုန်တွင်လာရောက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ - International Client များစွာရှိပြီး မြန်မာပြည်မှ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများကို နည်းပညာဆုိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံများစွာ ရရှိနိုင်မည်။ - တချိန်တည်းတွင် Players ထောင်ပေါင်းများစွာ ကစားနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး Multiplayer Online Game ဖြစ်သော Shan Koe Mee ဂိမ်းနှင့် မကြာမှီထွက်ရှိမည့် "မဟာ" ဂိမ်းများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့် အတွေ့အကြုံများစွာနှင့် excitement များလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတော်လျှင် တော်သလို၊ ကြိုးစားလျှင် ကြိုးစားသလို လစာများကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး ရာထူးလည်း တိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ - အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိုက်လျောညီစွာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူထက် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသူ၊ အသေးစိတ်လုပ်ကိုင်တတ်သူ၊ လေ့လာချင်စိတ်ရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ -တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ခါ ကုမ္ပဏီမှပေးသော Bonus များရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှစီစဉ်ပြီး မိမိအတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိမည်။ - နှစ်စဉ် ကုမ္ပဏီမှစေလွှတ်သော ခရီးများကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရှိမည်။ - လိုအပ်ပါက ကုမ္ပဏီမှ စေလွှတ်သော ခရီးသွားနိုင်ရပါမည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ job@studioamk.com သို့ CV များကို 23/12/2017 နောက်ဆုံးထားပြီးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Message ပို့ပြီးဖြစ်စေ၊ 09 254880612, 09 799656522, 09 799656533 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးဖြစ်စေ စုံစမ်းနိုင်သည်။
IT ဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၂ နှစ် နှင့် အထက် ရှိရမည်။ - Coding Background and knowledge ရှိသူဖြစ်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ - Documentation များကို prepare လုပ်နိုင်ပြီး Timeline Management လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Business Logic ရှိပြီး Analytical Skill ကောင်းရမည်။ - နိုင်ငံခြား Client များဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် လိုသဖြင့် English စာအား ရေးတတ် ပြောတတ်ရန် လိုအပ်သည်။
Studio AMK was founded in 2012 in Singapore and expanded to Myanmar in 2013, it specializes in customized solutions development. Within the first year of its operations, Studio AMK has carvedaniche for itself and have successfully deliveredadozen of projects. We offer software solutions and consultancy services that help our clients to improve their business operations and management. Now, Studio AMK is serving enterprise and government clients from Singapore, China, New Zealand and Myanmar. We are also operatingaleading gaming platform, MyanmarGame.com which has more than 1.5 million users in Myanmar. In, Oct 2014, we have introduced the First Myanmar Game payment service called gCoin.
Studio AMK brings the products of our clients to their next level! We're active in the following domains: